Umaki: htaccess | Martech Zone
Uyazi ukuthi ngaphezu kwama-90,000 hacks azanywa umzuzu ngamunye kumasayithi we-WordPress emhlabeni jikelele? Yebo, uma ungumnikazi wewebhusayithi enikwe amandla yi-WordPress, leyo stat kufanele ikukhathaze. Akukhathalekile ukuthi uqhuba ibhizinisi elincane. Abaduni abangabandlululi ngokuya ngosayizi noma ukubaluleka kwamawebhusayithi. Bafuna kuphela noma yikuphi ukuba sengozini okungasetshenziswa ukuze kuzuze bona. Ungahle uzibuze - kungani abahlaseli bekhomba amasayithi e-WordPress ku